Dadka Deggan Colorado ee aan sharciyeysnayn Waxay hadda dib u cusbooneysiin karaan Liisanka Darawalnimada Khadka tooska ah - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Dadka Deggan Colorado ee aan sharciyeysnayn Waxay hadda ku cusbooneysiin karaan Liisanka Darawalnimada Khadka Tooska ah
Dadka Deggan Colorado ee aan sharciyeysnayn Waxay hadda ku cusbooneysiin karaan Liisanka Darawalnimada Khadka Tooska ah
Laga bilaabo sanadka cusub, soogalootiga aan sharciga lahayn ee Colorado waxay cusbooneysiin karaan liisamada darawalnimada khadka tooska ah.
Isbeddelkan ayaa ka dhashay biil ka soo baxay aqalka Senate-ka oo la ansixiyay horaantii 2018 si wax looga beddelo Xeerka Waddo Colorado iyo Badbaadada Bulshada. Sharciga cusub ayaa u oggolaan doona Coloradans aan sharciyeysnayn inay cusboonaysiiyaan liisanka darawalnimada khadka tooska ah. Waxay sidoo kale u oggolaan doontaa lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti (SSN) in loo adeegsado helitaanka ruqsadaha edbinta iyo kaararka aqoonsiga iyo sidoo kale rukhsadda darawalnimada.
Deganayaashaas waxaa laga rabay inay sameystaan ​​ballan jireed si dib loogu cusbooneysiiyo dukumintigooda. Si kastaba ha noqotee, laga bilaabo Janaayo 1st, 2019, waxay ku cusbooneysiin karaan khadka tooska ah.
Yey saamayn ku leedahay tani?
Dad aan sharciyeysneyn oo horey shati wadista SB251 ugu haysta Colorado
** Haddii aad haysato amar masaafurin hore, fadlan ha dalban adigoon la tashan qareen **
Sideen ugu cusbooneysiiyaa liisanka darawalnimada / ogolaanshaha tilmaanta / Aqoonsiga internetka haddii aanan awoodin inaan muujiyo joogitaanka sharciga ah ee Mareykanka?
Waad soo booqan doontaa mydmv.colorado.gov si loogu cusbooneysiiyo khadka tooska ah. Waxaa lagaa doonayaa inaad soo dirto:
dhaarta loo baahan yahay
caddeynta diiwaangelinta canshuur celinta Colorado sanad cashuureedka isla markiiba ka horeeya
caddeynta degenaanshaha hadda jira gudaha Colorado or dukumiintiyada muujinaya caddaynta degenaanshaha joogtada ah ee Colorado isla markiiba ka horreeyay 24 bilood oo qayb ka ah hawsha.
Dukumiintiyadaan ka dib waxaa fiirin doona farsamo yaqaan liisan darawalnimo inta aan cusbooneysiinta la dhameystirin. Haddii aadan gudbin dhammaan dukumiintiyada loo baahan yahay, waxaad ka heli doontaa warqad ka socota DMV oo kuu ogeysiinaysa in dukumiinti dheeri ah loo baahan yahay.
Sidoo kale: Ruqsadaha Darawalnimada Cusub ee Dadka Aan Sharciyada Laheyn ee leh Nambarada Sooshiyaal Sikiyuuriti
Sharciga cusub ee Colorado wuxuu u ogolaanayaa soo galootiga inay u isticmaalaan Lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti Laysinka Wadista. Halkan riix si aad u akhrido wax badan.
Shatiga Darawalnimada ee Dadka Aan Sharciga Laheyn Su'aalaha Badanaa:
Waxaan dib uga cusbooneysiiyay khadka tooska ah mana aanan helin liisanka darawalnimada / rukhsadda tilmaanta / ID.
Liisankayga darawalnimada / ogolaanshaha tilmaamta / Aqoonsiga / ID ayaa lumay ama la xaday. Ma ka heli karaa beddelaad khadka tooska ah?
Ma doonayo inaan ku cusboonaysiiyo qadka. Ma u baahanahay inaan ballan qabsado?
Haddii aan haysto lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti halkii aan ka heli lahaa ITIN, ma waxaan u baahanahay nooc kale oo ballanta ah?
Waraaqo noocee ah ayaan isticmaali karaa si aan u muujiyo caddeynta lambarkayga Sooshiyaal Sikiyuuriti?
Xafiiskee ayaa bixiya adeegyada SB13-251?
Immisa ayey le'eg tahay liisanka darawalnimada / oggolaanshaha tilmaamidda / Aqoonsiga haddii aanan awoodin inaan muujiyo joogitaanka sharciga ah ee Mareykanka? Qiimahaani waa lamidyahay soosaarida bilowga iyo cusboonaysiinta.
Halkeen ka heli karaa macluumaad dheeri ah?
Halkan guji si aad uhesho su'aalaha la Weydiiyo.
Ma waxaad leedahay arrimo la xiriira cusbooneysiinta ama helitaanka liisankaaga?
Halkan ku soo gudbi arrintaada.